Maxay kawada hadleen Axmed Madoobe & Danjire Donald Yamamoto?
KISMAYO(P-TIMES)- Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada Kismaayo ay gaaraan wafti uu hoggaaminayo Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Amb Donald Yamamoto, kuwaas oo ka amba baxaya msgaalada Muqdisho.
Waftiga ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah taliyaha guud ee taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM Stephen Townsend, waxaana laga dareemayaa Kismaayo qaban qaabada soo dhoweyntooda.
Mas’uuliyiintaan ayaa markii ay tagaan Magaalada Kismaayo ayaa waxaa ay kulan la qaadan doonaan Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam,iyaga oo ka wada hadli doona arrimo farabadan oo aan weli la shaacin.
Hore waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya kulan ku yeeshay madaxweynaha Jubbaland iyo safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Amb Donald Yamamoto, waxaana la sheegay in kulankaas uu horudhac u ahaa kulanka maanta.
Ammaanka guud ee magaalada Kismaayo ayaa aad loo adkeeyey, waxaana sugaya ciidamada jubbaland iyo kuwa Kenya oo kamid ah AMISOM,waxaana dadka ku nool magaalada Kismaayo ay sheegeen in maanta si weyn magaalada looga dareemay imaanashaha wafdiga ka socda Dowladda Maraykanka.